NASSAT | AmaFayili amaHlathi - ukuCandwa nokuThola
Ulawulo loMlilo Wehlathi
Icandelo loMlilo: Ukuphunyezwa kunye nophuhliso lweziseko zophuhliso ngendlela engafanelekanga
Ukuthintela yonyango olungcono kakhulu nelona lubiza kakhulu nasiphi na isifo ...
Ngokwe-DGCONA, iNdawo yokuKhusela uMlilo weSizwe soLondolozo lweNdalo yoLondolozo lweNdalo, iSpain yindawo yokuqala kwilizwe leMeditera, ngokubhekiselele kwimihlaba yehlathi. Ngamhla, iinkcukacha ezithile zipapashwa kwimiphumo yale mililo ebini kwizinto eziphilayo kunye nefuthe labo kwimeko yendalo jikelele. Idatha eyoyikisayo iyasenza siqaphele imfuno yongenelelo lwawo ngamnye wethu, kokubili kumgangatho wabucala kunye nezoshishino, ukukhokela inxalenye yemizamo yethu yokukhusela imvelaphi yobuninzi, impilo kunye nenhlalakahle enikezelwa ngamahlathi ethu. kunye neendawo zasemaphandleni.
Ngalo njongo, i-NASSAT iye yavelisa isisombululo sendlela yokulandelela i-satellite kunye neenkcukacha zokunyakaza ezinokungabonakaliyo kunye / okanye ukusola, okokuqala ukufumana indawo kunye nemithombo enokwenzeka, kwakunye nokubeka iliso nokwandiswa komlilo. Yonke into ngexesha langempela. Le nkqubo isekela ukuthatha izigqibo kwimimandla yomsebenzi wokukhusela, ukulawula nokulwa nemililo yehlathi. Isisombululo sinikezelwa ngendawo yokujonga kwindawo ejongene nayo kunye nokukhethwa kwimiba ethile yokuphatha kakuhle okwandisa amathuba okulawula umlilo nokuqinisekisa ukhuseleko lwabasebenzi endle, ngokuzifumana ngamaxesha onke ukuphepha iingxaki abaqhubeka behlupheka namhlanje. Esi sisombululo sivumela nokusetyenziswa komlilo, ngendlela yokutshisa okulawulwayo, njengethuluzi lokulawula, elaneleyo nelingabizi, ukubeka imingcipheko ekusasazeni kwemililo (Martínez E., 2001- Umbhalo wokutshisa okulawulwayo).
Ukufumana iimifanekiso zeemifanekiso kunye nemifanekiso eqingqiweyo. Nabani na umsebenzisi obhalisiweyo angawulandela aphile okanye nge-smartphone okanye nayiphi enye indlela enokufikelela kwi-intanethi. Kwakhona, unokufumana i-alamu nge-imeyile kunye neesms.
Isisombululo sikhusela imimandla enobungozi obukhulu becala lomlilo kunye nezo zininzi ezibangelwa ukungonakaliswa, ukulungiswa komsebenzi wokhuseleko, ukulawula, ukulwa komlilo kunye nezinye izinto ezifanayo.
Ufanele ukwazi ukuba ...
Iindleko eziveliswe zixhobo zokuphela (ukungabali ukulahlekelwa kobuphilayo kunye nelifa lemveli esingenako ukubeka ixabiso), libalwe zizigidi zeeYurophu kunye neminyaka emininzi yokuphucula ngokukhawuleza (xa kwenzeka ukuba le nto ifaneleke).
Ukuba ufuna ulwazi oluthe vetshe, nceda uqhagamshelane ne-Dept yethu. zobunjineli kunye nenkxaso.